तपाईंको शरीर तपाईंसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ, थाहा पाउनुभयो ? — sancharkendra.com
तपाईं आफ्नो शरीरको भाषा बुझ्नुहुन्छ ? शरीरले के भन्दैछ ? शरीरले के संकेत गर्दैछ ? शरीरले के खोज्दैछ ? सुन्नुभएको छ ? वास्तवमा हाम्रो शरीर हामीसँग निरन्तर संवादमा हुन्छ ।
शरीरभित्र के भइरहेको छ, के हुनेवाला छ, के भयो ? त्यसबारे शरीरले हामीलाई जानकारी गराइरहेकै हुन्छ । तर, हामी वाहिरी कुरामा यति मग्न छौ कि आफैभित्रको कुरा सुन्न सकिरहेका छैनौ । आफ्नो शरीरले के भन्दैछ ? हामी सुन्दैनौ । किनभने हामी बहिरी संसारमै हराइरहेका छौ । रमाइरहेका छौ । त्यसो भए हामीले आफ्नो शरीरको भाषा कसरी बुझ्ने ? शरीरको आवाज कसरी सुन्ने ?
अब तपाईं एकछिन आँखा चिम्लनुहोस् । ध्यानमग्न हुनुहोस् । बाहिरी कुरा भुल्नुहोस् । आफन्त, परिवार, साथीभाई भुल्नुहोस् । भोक, तिर्खा, स्वाद सबै भुल्नुहोस् । वाहिरी वातावरण, हावापानी, भूगोल, कोलाहाल सबै भुल्नुहोस् । र, आफैभित्र एकाग्र हुनुहोस् । अर्थात आफ्नो शरीरभित्र के हुदैछ ? सुन्नुहोस् । अब तपाईंको शरीरले केही भनिरहेको पाउनुहुनेछ ।
शरीरले शान्त वा सहज महसुष गरिरहेको छ कि ? शरीरमा कुनै पीडा पो भइरहेको छ कि ? कम्मर दुखिरहेको छ कि ? छातीमा जलन भइरहेको छ कि ? टाउको भारी भइरहेको छ कि ? आँखा बिझाइरहेको छ कि ? मुख सुख्खा भएको छ कि ?
निश्चय पनि तपाईंले केही न केही थाहा पाउनुहुनेछ । शरीरले के संकेत गर्दैछ, के लक्षण देखाउँदैछ भन्ने कुराको भेउ पाउनुहुनेछ । किनभने जब तपाईं आफ्नै शरीरप्रति एकाग्रतापूर्वक सोच्न थाल्नुहुनेछ, शरीरको समस्या बुझ्न सक्नुहुनेछ । शरीरको गुनासो र दुखेसो अनुभूत गर्न सक्नुहुनेछ ।
खासमा हामीले आफ्नो शरीरसँग अन्र्तसंवाद जारी राख्नुपर्छ । शरीर कस्तो छ ? के भइरहेको छ ? किन भइरहेको छ ? चासो राख्नुपर्छ । शरीरलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन ।
हाम्रो मन लोभी छ । मिठो देख्नसाथ खान मन लाग्छ । हामी बेपर्वाह खाइदिन्छौ । हेर्दा लोभलाग्दो र खाँदा मिठो भएपनि त्यसलाई पचाउनका लागि पाचन यन्त्रले थप कष्ट झेल्नुपर्छ । पाचन यन्त्रमा त्यो बोझिलो बन्छ । तब हाम्रो शरीरले भन्छ, ‘भो यस्तो खानेकुरा ठिक छैन ।’
तर, हामी शरीरको भाषा सुन्दैनौ । पेट फुल्छ, अपच हुन्छ । शरीरमा उक्त खाना विषाक्त एवं विकार बन्छ । यो विकारलाई शरीरले वान्ता गरेर बाहिर निकाल्छ । शरीर भित्रको प्रणालीले यस्ता विकारलाई बाहिर पठाउँछ र शरीरलाई शुद्ध राख्ने प्रयास गर्छ । तर, हामी शरीरको प्रणाली बुझ्दैनौ । फेरी अर्को पटक उसैगरी हामी शरीरलाई दुःख दिन्छौ ।
रातभर हामी साथीभाई जमघटमा मदिरा पिउँछौं । मदिरासँगै मासु, तारेको, भुटेको मिठोमसिनो परिकार खान्छौ । शरीरले भन्छ, ‘भो अति भयो ।’ तर, हामी टेर्दैनौ । जबसम्म शरीर नै सिथिल भएर लड्दैन, तबसम्म पिउँछौं ।
अर्को दिन हामीलाई उठ्न जाँगर चल्दैन । शरीर भारी हुन्छ । ज्यान भद्दा हुन्छ । चक्कर लाग्छ । टाउको दुख्छ । शरीरले त भन्दैछ, ‘तिमीले खराब चिज खायौ । खराब तरिकाले खायौ ।’ तर, हामी शरीरको भाषा बुझ्दैनौ । शरीरको कुरा सुन्दैनौ । पुनः उसैगरी अर्को साँझ मस्त पिउन थाल्छौ ।
तपाईं फलफूल खानुहुन्छ । मेवा खानुहुन्छ । स्याउ खानुहुन्छ । खानेकुरा खाइरहँदा चपाएर खानुहुन्छ । खानामा ध्यान दिएर खानुहुन्छ । अर्को बिहान शौचालयमा बस्दा तपाईंले धेरै बल गर्नुपर्दैन । सजिलै दिसा हुन्छ । पेट हल्का हुन्छ । शरीर चंगा हुन्छ ।
अर्थात, तपाईंको शरीरले भनिरहेकै हुन्छ, यो गर्नु ठिक र यो गर्नु बेठिक । हिजो मदिरा सेवन गर्दा शरीरले भन्यो, ‘त्यो पेयले तिमीलाई ठिक गर्दैन ।’ आज फलफूल खाएको दिन भन्यो, ‘तिमीलाई यसले फाइदा गर्छ ।’
वास्तवमा शरीरले सबै कुरा भनिरहेको हुन्छ, यसो गर, त्यसो नगर । यसरी खाउँ, त्यसरी नखाउँ । हामी शरीरको भाषा सुन्दैनौ । शरीरलाई होइन मनलाई मालिक बनाउँछौ । मनको मर्जी अनुसार शरीरलाई दास बनाउँछौ । त्यही कारण शरीर रोगी, जीर्ण, कमजोर हुनथाल्छ ।
तपाईं नै तपाईंको शरीर होइन । शरीर तपाईंको हो । तर, शरीर तपाईं होइन । जबकी यो शरीरले जीवनभर तपाईंको साथ दिनेछ । यो शरीर अनमोल छ । तर, शरीरको मूल्य र महत्वलाई तपाईंले बुझ्न सक्नुपर्छ । शरीरको भाषा बुझ्न सक्नुपर्छ ।